Kaluumaysto reer Iiraan oo magaalada Gaalkacyo la keenay ka dib markii… – SBC
Kaluumaysto reer Iiraan oo magaalada Gaalkacyo la keenay ka dib markii…
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka Koonfureed ee hoos taga maamul goboleedka Gal-mudug ayaa sheegaya in maanta la keenay magaalada Gaalkacyo kaluumaysato u dhashay wadanka Iiraan kuwaasi oo doonidoodii ay wateen ay dajiyeen ciidamada NATO ee hawlgalka ka wada xeebaha Soomaaliya.
Kaluumaysadan ayaa tiradooda lagu sheegay 13 qof, waxaana la sheegay in mid ka mid ah uu dhaawac ka soo gaarey weerarkii ay ka geysteen xeebaha degmada Hobyo ciidamada NATO, iyadoo gabi ahaanba ay degtay doonidii ay wateen muwaadiniintan Iiriiniyiinta ah kuwaasi oo ay doonidooda horey u afduubeen kooxaha burcad badeeda Soomaalida.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxaha burcad badeedu ay u adeegsan jireen doonidaasi afduubka maraakiibta isla markaana ay ku qaadan jireen sahayda sida Raashinka & shidaalka, iyagoo sidoo kale ku xiriirin jirey doonyaha dheereeya ee ay ku afduubaan maraakiibta gooshaysa badweynta Hindiya & Gacanka Cadmeed.
Kaluumaysatan ayaa waxaa la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan masuuliyiinta maamulka Galmudug, kuwaasi oo xiriir la sameeyey madaxda wadanka Iiraan & ehelada ay ka soo jeedaan.
Dhinaca kale maamulka Galmudug ayaa si kulul u cambaareeyey weerarada ciidamada NATO ku qaadeen xeebaha degmada Hobyo iyagoo sheegay inaanay raali ka aheyn in weerar lagu qaado dad kaluumaysato oo aan shuqul ku laheyn falalka burcad badeeda.
Wasiirka Kaluumaysiga Galmudug Maxamed Cali Gurey ayaa sheegay in weerarkaasi dadka lagu laayey iyo kuwa lagu dhaawacay ay yihiin dad kaluumaysato ah, isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in hadii burcad badeed lala dagaalamayo in ciidamada shisheeye ay weeraraan goobaha ay ku sugan yihiin burcad badeeda.
Sidoo kale Gudiga warfaafinta Baarlamanka Dawlada FKMG ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho hadal ay ka soo saareen waxay si adag u cambaareeyeen weerarkaasi ciidamada shisheeye ka geysteen xeebaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Gudoomiyaha gudiga warfaafinta Xildhibaan Cawad Axmed Casharo oo warsaxaafadeed ka soo saarey magaalada Muqdisho ayaa ku tilmaamey weerarka diyaaradaha dagaalka NATO ka geysteen xeebaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Hobyo in yihiin weeraro lidi ku ah qaranimada Soomaaliya>